प्रत्येक नेपालीको बैङ्क खाता « Nepal Bahas
प्रत्येक नेपालीको बैङ्क खाता
प्रकाशित मिति : ३ बैशाख २०७६, मंगलवार ०७:५६
नयाँ वर्ष २०७६ को पहिलो दिन वैशाख १ गते आइतबार नेपालको बैङ्किङ इतिहासमा युग परिवर्तनको सन्देश प्रवाह हुने किसिमको अभियान सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ज्येष्ठ नागरिक, नेपालका २८ वटै वाणिज्य बैङ्क, बैङ्कर्स एसोसियसन र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पदाधिकारीहरूबीच सबै नेपालीको बैङ्क खाता अभियानको आरम्भ गर्नुभयो ।
यो यस्तो ऐतिहासिक क्षण हो जसले एक्काइसौँ शताब्दीमा विज्ञान र प्रविधिको विकासले ल्याएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली अभियानको एउटा आधारशीला शुभारम्भ भएको छ । अब प्रत्येक नेपालीको बैङ्क खाता खोल्ने अभियान सुरु भएको छ । कार्यक्रममा बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्षले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार एक वर्षभित्रै सबै नेपाली बैङ्किङ पहुँचमा जोडिने छन्, प्रत्येक नेपालीको बैङ्क खाता हुने छ ।
कसरी सम्भव ?
सरकारले सबै स्थानीय तहमा रहेका बैङ्क शाखामार्फत नै बैङ्किङ कारोबार सुरु गरिसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत राज्यबाट उपलब्ध हुने सुविधा बैङ्क खातामार्फत वितरण सुरु भइसकेको छ । अब सबै नेपालीको बैङ्क खाता सम्भव गर्ने नीति, योजना, कार्यक्रम तथा कार्य योजनासहित त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व वाणिज्य बैङ्कहरूकै हो ।
यस अभियानमा सरकारका अन्य संरचना र सबै तहका जनप्रनितिधिको पनि सक्रिय सहभागिता र अनुगमन जरुरी छ । यो त राष्ट्रिय जागरण अभियान हो । नागरिक सशक्तीकरणको अभियान पनि हो । त्यसैले यस अभियानमा सरकार, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक पार्टी, नागरिक अगुवा र सञ्चार माध्यमसमेत लाग्नुपर्छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि परिचालनबाट सहजै सबै नेपालीको बैङ्क खाता अभियान सफल पार्न सकिन्छ । अझ महिला प्रतिनिधिको परिचालनबाट सय दिनभित्रै सबै नेपालीको बैङ्क खाता सम्भव छ । नेपालमा अधिकांश जागरूक अभियान महिला परिचालनबाट सजिलै र समयमै सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका उदाहरण छन् ।
२०७५ जेठ १५ गते सार्वजनिक बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैङ्क शाखा पु¥याइने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्पूर्ण स्थानीय तहमा बैङ्क पु¥याउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न देशमा रहेका कुल २८ वटा वाणिज्य बैङ्कलाई बराबरी हिसाबमा शाखा खोल्न अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
सबै वाणिज्य बैङ्कले तदारुकतासाथ आफ्ना लागि परेको जिम्मेवारीअनुरूप स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने क्रम बढेको छ । ७५३ मध्ये ७१३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कहरूका शाखा पुगिसकेका छन् । बाँकी ४० मा यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कम्तीमा एक शाखा खुल्ने निश्चित छ ।
आर्थिक पारदर्शिताको व्यवसाय
वित्तीय सुशासन कायम गर्न पनि अत्याधुनिक बैङ्किङ सेवा नै विकल्प हो । समृद्ध नेपाल बनाउने पहिलो आधारशीला हो सबै नेपालीको बैङ्क खाता । नेपालमा सबैभन्दा पारदर्शिता र सुशासन भएको व्यवसाय भनेको बैङ्किङ व्यवसाय हो । बैङ्कहरूले पैसा र सुन चाँदीको व्यापार गर्छन् ।
अन्य क्षेत्रको तुलनामा ठूलो रकममा तलब भत्ता र सुविधा पाउने प्रमुख कार्यकारीहरू र कर्मचारीहरू पनि बैङ्किङमै हुन्छन् । व्यापार गर्ने र सरकारलाई राजस्व तिर्ने ठूला करदाता पनि बैङ्कहरू नै हुन् । वाणिज्य बैङ्कहरूले प्रत्येक त्रैमासमा आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्छन् । नाफा नोक्सानको हिसाब निक्षेपकर्ता, सेयरधनी, ऋणी, सेवाग्राही र नागरिकहरूले प्रत्येक त्रैमासमा पाउँछन् ।
यसमा पनि आन्तरिक अनुगमन तथा लेखा परीक्षण, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अनुगमन तथा लेखा परीक्षण र बाह्य स्वतन्त्र व्यावसायिक लेखा परीक्षक तथा लेखा परीक्षण संस्थामार्फत लेखापरीक्षण हुने हुँदा बैङ्कहरूमा अपवादको रूपमा रहने अक्षम, लोभी, पापी, भ्रष्ट र चरित्रहीनहरूबाट हुन सक्ने अनियमिता र भ्रष्टाचार पनि सहजै सार्वजनिक हुन्छ ।
त्यसैले बैङ्किङ कसुर गर्नेहरू हम्मेसी उम्कन पाउन्नन् । पैसालाई लक्ष्मीको रूपमा पुज्ने नेपाली समाजमा जनताको धनको ढुकुटी लिएर बसेकाहरू त्यसमा काम गर्नेहरू दूधले नुहाएझैँ स्वच्छ र पवित्र हुनुपर्छ भन्ने नै हो । सरकारले सहुलियत दिई वाणिज्य बैङ्कहरूलाई शाखा खोल्न प्रोत्साहन गर्नु सरकारको दायित्व हो भने वाणिज्य बैङ्कहरूले पनि न्यूनतम लागतमा सम्पूर्ण नेपालीहरूको बैङ्क खाता अभियान सञ्चालन गर्नु संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व हो ।
आइतबार शुभारम्भ भएकै दिन नेपालका बैङ्कहरूले सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत आफ्ना शाखा कार्यालयहरू खोली नागरिकलाई बैङ्क खाता खोल्न प्रोत्साहित गरे ।
‘गणतन्त्रको उपहार, सबै नेपालीको बैङ्क खाता १’ अब यो काम गर्नुपर्छ । सरकारले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विद्युत्, टेलिफोन, सुरक्षा निकाय र केन्द्रीय बैङ्कले नोटकोषको खर्चलगायत सामान्यभन्दा सामान्य व्यवस्था गरिदिँदा पनि तत्काल सम्पूर्ण स्थानीय तहमा बैङ्क पु¥याउन सकिन्छ । सम्पूर्ण नेपालीको बैङ्क खाता खोलिदिन सकिन्छ ।
तथ्याङ्कहरूले सवा दुई करोड बैङ्क खाता भएको दर्शाउँछन् । तर, त्यसमा पनि सहरिया, व्यवसायी, कर्मचारीहरूको एकै व्यक्तिको बहुखाता छन् । तीन करोड सबै नेपालीको नाममा रु। १०० राखेर खाता खोलियो भने पनि तीन अर्ब रुपियाँ मात्र लाग्छ ।
यो खासै ठूलो खर्च होइन तर हामी नेपाली आधुनिकता र विकासमा अगाडि बढ्ने यो एक सुनौलो अवसर बन्ने छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन अब सबै वाणिज्य बैङ्क आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत बैङ्क खाता खोलौँ अभियानमा सहभागी हुनुपर्छ ।
नयाँ सभ्यताको सुरुवात
नवजात शिशु समाजको सदस्यका रूपमा आयो भन्ने उसको सामाजिक संस्थागत परिचय नै हो बैङ्क खाता । हामीले भर्खरै जन्मेको शिशुलाई पनि उसको नाममा बैङ्क खाता खोल्ने संस्कृतिको सुरुवात गर्नुपर्छ । सभ्य समाज, विकसित समाजमा त बच्चा जन्मँदै बच्चाको नामसहित राज्यद्वारा सञ्चालित बैङ्कहरूले बैङ्क खाताको व्यवस्था गर्छन् ।
विभिन्न किसिमका स्किमसहित नवजात शिशुको नाममा रु। ५०० वा १००० सम्मको खाता खोल्ने योजनासमेत आउन सक्छन् । नवजात शिशुको परिचय, पहिचान र राज्यद्वारा उसलाई सहुलियतलगायत दिनुपर्ने सबै सुविधा बैङ्क खातामार्फत नै दिनुपर्छ । हाम्रा विभिन्न सम्प्रदायमा नवजात शिशुलाई जन्मँदा, मुख हेर्दा, न्वारन, अन्नप्रासन आदिमा पैसा वा दक्षिणा वा उपहार दिने सांस्कृतिक मूल्य र मान्यताहरू छन् । नवजात शिशुलाई समेत खाता खोल्ने अभियान चलाएर हामीले नयाँ सभ्यताको सुरुवात गर्नुपर्छ ।
खोलौँ बैङ्क खाता कार्यक्रमअन्तर्गत नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी, फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा सवारी चालक अनुमतिपत्र वा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरी उपलब्ध गराएको फोटोसहितको सिफारिस वा पहिचानपत्र वा अन्य कागजात लिई बैङ्क शाखामा गई आफ्नो नाममा खाता खोल्न सकिन्छ ।
आफ्नो कुनै बैङ्क खाता छैन भन्ने स्वघोषणासहित खोलेका खातामा सम्बन्धित बैङ्कले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च लेख्ने गरी रु। १०० जम्मा गरिदिन्छ ।
‘लेखक नेपाल बैङ्क लिमिटेड तालिम तथा विकास डिभिजनका प्रबन्धक हुनुहुन्छ ।’
#नेपाल राष्ट्र बैङ्क
#बैङ्क खाता अभियान
न्यायालय सुधारको सपना : गोला प्रक्रियाले वकिलहरुको आन्दोलन कमजोर बनाएकै हो ?
नेपाली कांग्रेसको यस्तै छ हाल
न्यायालयको समस्यामा पाँच दलीय गठबन्धन र सभामुख पनि दोषी